Manjakandriana, Brickaville, Ambalavao : namoa-doza hatrany ny taksiborosy, olona iray maty, 13 naratra mafy | NewsMada
Manjakandriana, Brickaville, Ambalavao : namoa-doza hatrany ny taksiborosy, olona iray maty, 13 naratra mafy
Andro fety, ankatoky ny fety, miseho lany ny lozam-pifamoivoizana. Tany amin’ny lalam-pirenena, taksiborosy telo niharan-doza, ka nahafaty olona. Tsy latsak’izay ny naratra vokatr’izany.
Tsy tapitra hatreo ny loza ateraky ny taksiborosy, fa mitohy hatrany. Loza telo be izao niseho ny faran’ny herinandro teo. Ny voalohany, tany Mandraka, kaominina Ambatolaona, taksiborosy Sprinter ho any Toamasina no tapaka hisatra tamin’ny fidinana iny ka nifadona tamin’ny kamiao nijanona tamin’ny sisin-dalana. Mafy ny fifandonana ka naharatrana olona dimy izany. Nalefa haingana tany amin’ny hopitaly Moramanga ireo naratra, izay maromaro ny voa tamin’ny lohany sy ny tongony.
Ny faharoa tany, Brickaville, taksiborosy marika Ford, no nivadika tampoka noho ny kodiarana aloha vaky. Voalaza fa nandeha mafy io fiara io ka izay ny nahavaky ilay kodiarana aloha ary nampivadika azy. Ambony ambany mihitsy ilay fiara. Vokany, olona iray maty teo noho eo, ary efatra hafa naratra mafy. Notsaboina any amin’ny hopitaly Brickaville ireo naratra ireo.
Tsy tany amin’ny lalam-pirenena faharoa ihany ny nisehoana loza, fa tany amin’ny lalam-pirenena fahafito ihany koa, taksiborosy Sprinter iray nivadika ambony ambany, tany Andonaka Ambalavao. Olona efatra naratra mafy vokatr’ity fivadihana ity ary voatery naiditra hopitaly any Ambalavao. Raha ny fanazavana azo, mitovitovy ihany ny anton’ny loza, dia ny fandehanana mafy, ny tsy fahatomombanana eo amin’ny fiara. Efa manao ny famotorana rehetra ny zandary any amin’ireo faritra nisehoan’ny loza ireo.
Amin’izao volon’andro fety izao, matetika tena isehoan’ny loza. Indrindra ny lozam-pifamoivoizana. Antony mahatonga izany, hoy ny mpamily nanontaniana, ny fahamehana eo amin’ny mpitatitra mba hahavita “tour” haingana, noho ny hamaroan’ny mpandeha. Eo no miteraka ny loza satria ny fiara tsy voaaramaso ny lafiny teknika, ny mpamily mety ho reraka.
Fotoana tokony anamafisana ny fanaraha-maso ny fiara miasa sy ny mpamily izao, mba ho fisorohana ny loza. Eo ihany koa ny mpitandro filaminana, hampahatsiahy ny fanarahan-dalana tokony ataon’ny fiara mpitatitra na ny taxi-be eto an-dRenivohitra ihany koa aza.